LR41: funda ngakumbi ngezi seli okanye iibhetri | Izixhobo zasimahla
Kwimarike kukho isixa esikhulu iibhetri ezinombane ohlukeneyo, amandla, kananjalo nentaphane yeefom. Nganye ijoliswe kudidi oluthile lwesixhobo. Sele sihlalutye enye yazo kwixesha elidlulileyo, njengoko injalo Imigca ye-CR2032. Ngoku, kweli nqaku, siza kuhlalutya "udade" wale nto, njengoko injalo i-LR41, ekwabizwa ngokuba ziibhetri ezibizwa ngokuba ngamaqhosha.
Iimpawu zayo zenza ukuba zilungele iintlobo ezithile ze izicelo apho ubukhulu kunye nobude bexesha, kunye neemfuno zamandla zingaphakamanga njengakwezinye izixhobo ezikhulu ...
1 Yintoni ibhetri ye-LR41?
1.1 Apho ukuthenga LR41 iibhetri
2 Okungakumbi malunga neebhetri
2.1 Iindidi zebhetri
2.1.1 Ayiphinde igcwaliswe
2.1.2 Inokutsha kwakhona
Yintoni ibhetri ye-LR41?
La ibhetri okanye ibhetri ye-LR41 luhlobo lwebhetri kusapho lweqhosha. Ikwaqwalaselwa kwakhona njenge-alkaline kwaye ayinakuhlaziywa. Amandla ombane yi-1.5 volts, enobungakanani obuncinci bezixhobo zombane ezifuna amandla asezantsi, njengeewotshi, izikhombisi zelaser, izixhobo zokubala, kunye nezinye izixhobo zombane.
Ngokumalunga nokwenziwa kweeseli zabo, olu hlobo lweebhetri luyasetyenziswa iikhemikhali ezahlukeneyo ngenxa yokufunda kwayo. Ngendlu yesinyithi yangaphandle eneepali ezintle ziyinxalenye ethe tyaba apho imibhalo ihlala inayo, ubuso obuchaseneyo bungeyiyo ipali. Ngokumalunga nexesha, banokufikelela kwiminyaka emi-3 yokugcina.
Apho ukuthenga LR41 iibhetri
Unokuzifumana ezi ntlobo zeebhetri kwiivenkile ezininzi ezizodwa, nangona kungekho lula ukuzifumana njengohlobo A, ezaziwa kakhulu. Nangona kunjalo, kumaqonga anjengeAmazon onako ukuthenga Iyunithi nganye okanye iipakethe:
Ipakethi kaMaxell yeebhetri ezili-10 zohlobo lwe-LR41
Ipakethe yeCamelion yeeyunithi ezi-2 ze-LR41
Iyunithi yeDuracell 376/377 LR41
Okungakumbi malunga neebhetri
Kufuneka ukuba umahluko phakathi kwebhetri nebhetri, nangona ngokubanzi la magama asetyenziswa ngokungakhathali (isizathu ligama elithi ibhetri ngesiNgesi, enomdla kwaye isebenza kuzo zombini), ukuba ufuna ukuba ngqongqo ngakumbi, unokwenza oku kulandelayo:
Ibhetri: ukuba ibhetri inokuphinda ibhatale kwakhona ukuba umbane ubonelelwe kuyo, oko kukuthi, akukho bhetri zingaphinda zihlaziyeke. Ukongeza, bayasokola ukuzikhulula kwiintsuku okanye kwiinyanga xa bengasetyenziswa.
UPila: yinkqubo engenakuphinda ibuye, kwaye xa ikhutshelwa ayinakuphinda ilayishwe. Endaweni yoko, zinokugcinwa iminyaka ngaphandle kokuzikhupha ngokubonakalayo.
Izitali zinokwahlulwa zibe Iintsapho ezimbini ezinkulu, kwaye ngaphakathi kwabo banokuqhubeka bekhathaliswa ngokweendidi kunye neempawu:
Las iibhetri ezingagcwaliski kwakhona akufuneki bazame ukulayisha, njengoko zinokonakala, azenzelwanga loo nto. Zenzelwe ukuba zisetyenziswe kuphela. Ngaphakathi kweli qela kukho:
Zezindlu: zezona zithandwa kakhulu, kwaye nezo ungazifumana kwiiwotshi zodonga, ulawulo olukude, njl. Phakathi kwezi zinto:
Ialkali: zixhaphake kakhulu namhlanje. Zenziwe nge-zinc njenge-anode kunye ne-manganese dioxide njenge-cathode. Olu hlobo lwebhetri lomelele kakhulu, kwaye kufuneka ligcinwe kuma-25ºC okanye ngaphantsi kulondolozo olufanelekileyo. Ngokwemilinganiselo, kukho iAA (LR6), AAA (LR03), AAAA (LR61), C (LR14), D (LR20), N (LR1) kunye ne-A23 (8LR932), zonke ziyi-1.5 volts kunye nobukhulu obahlukeneyo , Ngaphandle kweyokugqibela eyi-12V.
Salinas: Ezi bhetri zine-zinc-khabhoni, kwaye ziya zisanda ukusetyenziswa ngenxa yesikhundla sazo esisezantsi kunye nobude ngokuthelekiswa nealkali. Uya kufumana kwakhona iintlobo ezifanayo, ezinje ngeAA, AAA, AAAA, njl., Kodwa baneekhowudi ezahlukeneyo ze-IEC kunye nee-ANSI.
ILithium: Babandakanya i-lithium ekubunjweni kwabo, kwaye zinokubakho iintlobo ezininzi eziphantsi kakhulu zokuzikhupha, ze-1% kuphela ngonyaka. Ukongeza, banoluhlu olubanzi kakhulu lokusebenza, ukusuka -30ºC ukuya ku-70ºC. Ngaphakathi ungafumana isinyithi kunye ne-lithium disulfide, enje nge 1.5v AA okanye iAAA, 3.6v lithium-thionyl colouro, 3v lithium manganese dioxide ...
Unxande: Njengoko igama labo libonisa, ziibhetri ezimilise eziziingxande, ezahlukileyo kwezo zezilinda. Kwixesha elidlulileyo zazithandwa kakhulu, nangona zingasetyenziswanga kangako ngenxa yobungakanani bazo. Kule miba, ngaphezulu kwe-4.5v kunokufikelelwa.
Ialkali: ezo zaziwa ngokuba zii-LRs zinokuvela kwi-4.5v yepakethi yebhetri okanye i-3LR12, ukuya kwi-9v ye-PP3 (6LR61), nge-6v yebhetri yebhetri (4LR25).
Salinas: Njengakwiisilinda, ziye zangasasebenzi kwaye kunqabile ukuba zisetyenziswe, kuphela kwizicelo ezithile apho zinokufumana inzuzo kunezo zealkali. Ufumana abafana ne-PP6 kunye ne-PP9 ...
ILithium: Kukho neebhetri zesikwere ze-lithium, zihlala zine-lithium thionyl chloride okanye i-lithium manganese dioxide. Zombini ezi 9v.
Iqhosha: Kweli candelo i-LR41 yeli nqaku inokungena. Zibhetri, njengoko igama lazo libonisa, ezimile okweqhosha. Zisetyenziselwa izixhobo ezinemfuno ephantsi yombane kunye nobukhulu obuncinci, njengeewotshi, izixhobo zokuva, njl.
Ialkali: ziibhetri eziyi-1.5v, ezineekhowudi ezinjenge-LR54, LR44, LR43, LR41 kunye ne-LR9.
ILithium: Kukho ezinye ezinombane we3v. Ngobomi obude obuluncedo kunye nokukwazi ukusebenza kumanqanaba obushushu abanzi kakhulu. Ezi bhetri ziphawulwe njenge-CR ye-lithium manganese dioxide kunye ne-BR ye-lithium-polycarbonate monofluoride (i-lithium thionyl chloride ikwakhona, nangona inqabile, ine-3.6v kunye nexesha lokuphila elinokudlula iminyaka eyi-10, kwizicelo ezibalulekileyo kunye nekhowudi ye-TL). Umzekelo, i-CR1025, CR1216, CR2032, BR2032, CR3032, njl. Zonke zinemilinganiselo eyahlukeneyo.
Isilivere oxide: Banokufikelela kwi-1.55v kwaye babe nokusebenza okuhle kakhulu kubushushu obuphantsi. Ziye zahlulahlulwa ziikhowudi ze-SR, ezinje nge-SR41, SR55, SR69, njl.
Iiseli zomoya-zinc: zixhaphake kakhulu kwizincedisi zokuva ngenxa yobungakanani bazo kunye nofakelo olulula. Ngombane wee-volts ze-1.4. Ikhowudi yayo yi-PR, njenge-PR70, PR41 ...
Iibhetri zekhamera: Ziyafana nezangaphambili, kwaye zikhona ne-lithium, kodwa zihlala zinokupakishwa okhethekileyo kwezi zixhobo. Zikhulu ngobukhulu, kwaye zinokubonelela ngee-voltages ukusuka kwi-3 ukuya kwi-6 volts. Ngeekhowudi ze-CR kule meko. NjengeCR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, njl.
Njengoko igama layo libonisa, ziibhetri, nangona uninzi luthi iibhetri ezinokuphinda zisebenze (enyanisweni, zinokuba nefomathi efanayo kwaye zijongeka njengeebhetri ezingahlawulelwayo). Ezi ntlobo zeebhetri azenzelwanga ukuba zisetyenziswe kube kanye, kodwa zinokusetyenziswa amaxesha ngamaxesha, kunye nemijikelezo emininzi yokuhlawula. Ezona zixhaphakileyo zezi:
Sukusebenzisa i-NiCd okanye i-NiMH tshaja yeebhetri ze-lithium, okanye kungenjalo. Esichanekileyo kufuneka sisetyenziswe kwimeko nganye.
I-NiCd: Ezi bhetri ze-nickel-cadmium zazithandwa kakhulu, kwaye zisetyenziswa kancinci nangaphantsi ngenxa yempembelelo yememori yazo. Ngamanye amagama, umthamo wayo uyancipha ngokusetyenziswa. Banokuhlala malunga ne-2000 yokuhlawulwa kunye nokukhutshwa kwemijikelezo, into ephawuleka kakhulu.
NiMH: Zithandwa kakhulu, kwaye azinampembelelo imemori zininzi njengangaphambili. Ukongeza, baxhasa uxinano lwamandla aphezulu, ekwalungile. Banenqanaba eliphezulu lokuzikhupha kunye nesantya esincinci sokutshaja xa kuthelekiswa neNiCd. Banovakalelo ngakumbi kutshintsho lobushushu. Zidlula phakathi kwe-500 kunye ne-1200 yemijikelezo yokukhutshwa kwentlawulo.
I-Li-ion: zezona zisetyenziswa kakhulu namhlanje kwiipropathi zabo ezintle. Baxhasa uxinano oluphezulu lwamandla kwiseli nganye kune-NiCd kunye ne-NiMH, ke zinokwakhiwa zihambelana kakhulu kwaye zilula. Iziphumo zabo zememori ziphantse azinakwa, njengoko kunjalo nenqanaba labo lokuzikhupha, kodwa banamanqaku abuthathaka, kuba ukuhlala kwabo kungafikeleli kumjikelo we-NiCd. Kule meko, ziphakathi kwe-400 kunye ne-1200 yemijikelezo yokuhlawula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » Izinto zombane » LR41: funda ngakumbi ngezi bhetri
Photodetector: yintoni, yenzelwa ntoni kwaye isebenza njani